China BONOVO Medium Digger xcavator Masinina mihetsika amin'ny tany ho an'ny orinasa mpitrandraka sy mpamatsy | Bonovo
Ny halalin'ny fitrandrahana Max
Max haavon'ny fihadiana
Marika DOOSAN tany am-boalohany
Marika Shantui tany am-boalohany
Angovo mihady siny
• Fahombiazana avo lenta •Fiarovana angovo • Pro-tontolo iainana
Engine QSB7, China Stage III & Euro III Emissions compliant. Mahery kokoa, maharitra, fanjifana solika ambany, azo itokisana kokoa ary mahomby.
Fitaovana goavam-be sy fanodinam-bidy avo lenta
Famindran-toerana lehibe sy paompy mahomby be, famerenana amin'ny laoniny ny boom / stick, famindrana fiara haingana kokoa, amin'ny alàlan'ny paompy voamarina sy fampifandraisana maotera, max. fampiasana ny herin'ny motera hanatsarana tsara ny fahombiazan'ny asa azo ampiharina.
Ahoana ny fomba hiarovana ny excavator anao amin'ny fahasimbana tsy mety?
Ny excavatoranao dia fampiasam-bola lehibe. Arovy toa azy izao. Hamarino tsara fa ny mpikaroka anao dia manana karazana mekanisma na teknolojia fanoherana ny halatra. Ny zavatra farany tadiavinao dia ny tsy misy fitaovana tampoka hatokisanao matetika. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hisorohana ny fahasimbana.
Famokarana, fizahana ary fampiharana
Fizarana sy fametahana fanampiny
Indraindray amin'ny fanananao dia mety mila mividy ampahany fanoloana ianao. Noho io antony io dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa afaka miditra mora amin'ireo faritra mandrafitra ny masininao ianao.
Vantany vao nifidy excavator tianao ianao dia jereo ny manodidina raha azo vidiana ny faritra fanoloana ao amin'ny faritra misy anao. Na dia tsy mila hita eo an-toerana aza izy ireo dia hanampy anao hamaha olana haingana kokoa ny fananana azy ireo akaiky. Raha tsy izany dia mila miandry ampahany halefa any aminao ianao.
Hamarino tsara fa misy akaiky ny fametahana. Amin'izay, rehefa mila azy ireo ianao, dia ho mora idirana izy ireo. Hamarino raha misy safidy azo hofana, raha toa ka tsy mampiasa afa-tsy fampidirana sasany ianao indraindray.
BONOVO Attachments factory Afaka manolotra anao karazana fifampikasohana be dia be ho an'ny excavator anao, mila ilazanao fotsiny ny karazan'asa mety hiasa mety hatrehanao, ny varotra ataonay dia hanolotra anao vahaolana mividy iray tampoka avy hatrany.
BONOVO Orinasa fanamoriana dia mijanona foana mba hanomezana anao faritra mety ho an'ny undercarriage ho an'ny masininao rehetra, ao anatin'izany ny excavator, bulldozer, mpihady minitra, mpamadika lakilosy sns.
Fitsipika momba ny kaomandy
Teo aloha: Amphibious Excavator
Manaraka: Mini Excavator 1 Ton - ME10
«Excavator mini» 0,8 taonina
Mpihady crawler 20 taonina
Excavator 20 taonina
Mpitsako fihadiana 21 taonina
Mpihady crawler 33 taonina
excavator mpanelanelana saka
excavator mora vidy
Équipements de fananganana
fitaovana amin'ny fanamboarana
excavator 2 taonina
excavator teboka 3
excavator any Etazonia
excavator mahery 1:14
excavator oruga 20 taonina
mpanamboatra lamba escavadeira nova 20 taonina
hitachi fihadiana 20 taonina
hunia 1593 fihadiana
fandalinana mpikaroka moka 390
excavator antonony amidy
excavator habe antonony
kodiarana excavator 16 / 70-24 huachi
kodiarana excavator 16 / 70-24 huachi gost 24779-81